Mobile Phone Firmware လိုချင်သူများ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပီ...(တစ်ခုချင်းလား , GB 1000 လား GB2000 လား) ~ ဘလော့ခရီးသည်
Mobile Phone Firmware လိုချင်သူများ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပီ...(တစ်ခုချင်းလား , GB 1000 လား GB2000 လား)
အကြောင်းအမျိုးကြောင့် Firmware ရှာဒေါင်းမရဖြစ်နေတာလား
ဒေါင်းဖို့ကျတော့လည်း Resume မရမှာစိုးလို့ စိတ်ညစ်နေတာလား
တွေ့ပြန်ပီ ဒေါင်းလိုက်တဲ့ Firmware က ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ မကိုက်လို့ Dead သွားမှာကြောက်နေတာလား. Display ဖြူသွားမှာ , Vibrate ပဲ တုန်နေတော့မှာ , IMEI ပျောက်တာမျိုးဖြစ်သွားမှာ ကြောက်နေတာလား
အဲ့လို အခက်အခဲတွေ ကြောင့် စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ .
Phone Info လေးပြပီး ဘယ်ဟာပဲတင် ဒီဟာပဲ တင်
ပြောပြပေးပီး အဆင်ပြေနိုင်လောက်တဲ့ Firmware မျိုး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
Firmware တစ်ခုချင်းသော်လည်းကောင်း. (Online မှ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်)
1000 GB သော်လည်းကောင်း , 2000 GB သော်လည်းကောင်း. (hard Disk ဖြင့်)
ဖုန်းရဲ့ Info လေးကို Chat box မှာ ပြပီး အဆင်ပြေမယ့် Firmware ကိုတစ်ခါတည်း Download ဆွဲဖို့
လင့်ချပေးမှာပါ..ပီးတော့ ဒီလိုတင်ရင် ဒီ Error တက်တယ် ဟိုလိုတင်ရင် ဒီ Error မတက်ဘူးကအစ
အလျဉ်းသင့်ရင်သင့်သလို ပြောပြသွားပေးမှာ ဒါမှ Error ကင်းမှာကိုးးး မဟုတ်ဘူးလား.
ကဲ ဆက်သွယ်ရမည့် အကောင့်ကတော့
ကိုအောင်ခန့် (YGN) - 09973050374
Facebook မှ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ရန်
https://web.facebook.com/mr.aungkhantuser Posted in: Email This